Leverage, Ọtụtụ na oke - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeForex SchoolLeverage, Nza na oke
Leverage na-anọchi anya a oke trading ruru, na Forex a nwere ike ịbụ nnọọ elu, mgbe ụfọdụ, ihe dị ka 400: 1, nke pụtara na a oke ego nke dị $ 1000 nwere ike ịchịkwa a ọnọdụ size of $ 400,000.
Ọ bụrụ na e nye gị 100: 1 leverage brokerage akaụntụ, na i nwere a mini akaụntụ na $ 1000 (1000 nkeji), i nwere ike tinye $ 100 (100 nkeji) nke na akaụntụ n'ime ahịa na oke na ahia a $ 10,000 (10,000) unit ọnọdụ. N'ihi na ọ bụla $ 1 etinye n'ime ahịa na oke gị ore na-agbakwụnye ọzọ $ 99-eme ka ọ $ 100. Nke a pụtara na ị nwere ike ahia mini nza uru $ 10,000 iji akaụntụ kwụrụ ụgwọ na naanị $ 100 ma ọ bụ karịa.
Leverage 1: 100 na-enye ohere ahịa na-etinye elu 1 akụkụ nke ọ bụla 100 nke ahia: na atụ n'elu, ahịa na-eme $ 100 na ndị fọdụrụ ($ 9,900) na-abịa site ore ahia.
Cheta na: Broker leverage adịghị agbanwe uru nke ọtụtụ!
Leverage adịghị emetụta uru nke otutu: a mini ọtụtụ bụ 10,000 nkeji na a ọkọlọtọ ọtụtụ bụ 100,000 nkeji, n'agbanyeghị nke leverage. Kama, leverage nwere mmetụta na ọnụ ọgụgụ nke nza i nwere ike inwe na ahịa, dabere na isi obodo na akaụntụ gị.
N'ụzọ dị iche na ngwaahịa ahịa ebe ị na-achọ zuru nkwụnye ego nke ego ahịa, na Forex ahịa naanị chọrọ nkwụnye ego. Ego nke ego gị ga - akwụ ụgwọ (ị ga-agbazite ya n'aka onye na - ere ahia gị). Akụrụngwa nwere ike ikwe ka ị gbaziri n'aka onye na-ere ahịa gị na mpaghara, ma naanị na 2: 1 leverage, na ọdịnihu nwere ike inye nnukwu ihe ntinye aka (ruo 30: 1) ma nwee nkwekọrịta nkwekọrịta nke na-ebelatawanye mgbanwe.
Forex, na iche, na-enye ohere na o iji ukwuu leverage (ruo 400: 1) na kwukwara ego nke eji mgbanwe ọtụtụ nha. All azụmahịa nwere ike na-akpa àgwà via ọkọlọtọ, Obere, Micro ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, dị ka ala dị nano ma ọ bụ penny size. Ọ bụla na-size akụkọ ihe a dị iche iche ọtụtụ nke nkeji nke isi ego, nke n'aka nke ọnọde a dị iche iche pip uru. N'okpuru ebe a bụ mfe chaatị na-egosi ọdịiche dị n'otú ọtụtụ nha, tụrụ na nkeji, olu maka isi ụzọ abụọ ebe ndị isi ego bụ USD (ex. EURUSD ma ọ bụ GBPUSD).
1 Standard Lot 100,000 nkeji 1.0 1 pip = $ 10
1 Mini Lot 10,000 nkeji 0.1 1 pip = $ 1
1 Micro Lot 1,000 nkeji 0.01 1 pip = $ 0.10
1 Nano Lot 100 nkeji 0.001 1 pip = $ 0.01
N'ihi na a ọzọ kpọmkwem ngụkọta oge nke pip uru, nke nwere ike ịdị iche iche mgbe isi abụghị USD, i nwere ike iji ihe online pip mgbako.
Ugbu a, ihe na-akawanye na-akpali bụ kenha nke a dịgasị iche iche nke ọtụtụ nha na dịgasị iche iche nke leverage.
The table n'okpuru egosi na leverage ụdị, pasent na oke mkpa na-emeghe otu òkè, ma na-akpata dollar ego chọrọ na-emeghe otu nza (ọkọlọtọ, Obere, Micro na nano):
Leverage / oke Iwu Isiokwu maka iche iche na Lot Nha
% Nke oke mkpa
emeghe 1 ọtụtụ
$ Ọnụ ego
Choro maka 1 ọkọlọtọ
ọtụtụ ($ 100,000)
Choro maka 1 Obere
ọtụtụ ($ 10,000)
$ Ọnụahịa (Ógbè)
Choro maka 1 Micro
ọtụtụ ($ 1,000)
$ Ọnụ ego (oke)
Choro maka 1 Nano
ọtụtụ ($ 100)
Ị pụrụ ịhụ site na chaatị n'elu na na a 100: 1 leveraged ore ị na-na na a chọrọ iji na-edi $ 10 maka nke ọ bụla ($ 1000) Micro otutu. Nke a pụtara na ọ bụrụ na i nwere nnọọ $ 200 na akaụntụ gị, ị ga-enwe ike ahia ruo ruo 20 Micro ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụrụ na ị ka chọrọ.
Ma adịghị anyaukwu!
Ọ na-adịghị atụ aro na i ahia ọbụna 10% gị kenyere oke ruru ke otu ma ọ bụ nchịkọta ọtụtụ ọnọdụ. Smart leverage, dị ka anyị ga-ahụ, bụ ihe na edoghi nke 2: 1 leverage, ma ọ bụ 2% gị free oke.
Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị nwere a Micro n'ihi $ 1000, na 100: 1 leverage, ọ ga-akasị mma ma ọ bụrụ na ị na-ahia naanị 2 Micro nza (2: 1 leverage, ma ọ bụ 2% nke free oke). Nke a ga-ahapụ gị 98% free ( "ejibeghi ma ọ bụ dị oke") na-etinye gị trades. Onye ọ bụla pip ga-agbanwe gị na akaụntụ site na 20 cents (2 Micro nza X 10 cents). Ọzọkwa, ọ bụ eleghị anya a mma na-achị n'agbanyeghị na a pụrụ ọ dịghị ihe karịrị 2% na onye ahia. Ibute a 100 pip nkwụsị ọnwụ gị 2 Micro ọtụtụ ahia ga-apụta na ị ga-n'ihe ize ndụ na a kacha nke 2% (100X20 cents = $ 20, nke bụ 2% nke $ 1000). Nke a ga-ekwe ka ị na-adị ndụ a eriri nke weere, nke-ahụkarị dịruru ná njọ na Forex.
Leverage pụrụ ịbụ enyi gị ma ọ bụ onye iro, dabere na otú ị na-eji ya. Leverage bụ dị ka a oké trading ngwá ọrụ, na-ekwe ahịa na obere obodo na-ekere òkè ahịa na ha agaghị ahia ma, ma dị ka ọ bụla ngwá ọrụ (na-eche nke a Chainsaw), ị na-amụta na otú iji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na ọ pụrụ ibelata ị ala.
Gịnị ga-Gaje ize ndụ ma na-enweta Ụgwọ Ọrụ Of Ịhọrọ A Broker Ịchụ A Higher leverage Than ọzọ?
Imirikiti isiokwu na-atụle ịdọ aka ná ntị na ịdọ aka ná ntị megide ụlọ ọrụ brokerage na-enye ọnụọgụ ego dị elu karịa 100: 1. Gịnị bụ n'azụ ịdọ aka ná ntị ndị a? Ọ na-abụkarị echiche zuru ezu na onye ahịa ahụ na-ere ahịa na-ahụkarị bụ onye nwere anyaukwu dumb ignoramus bụ onye ga-enwe ike iwepụ ihe ngosi ahụ, ma ọ bụrụ na ọ na-enye ohere. Ihe eji eme ihe na nke a dị ka ụdọ, na mgbe onye ahịa nyere ya nke ọma, ọ na-atụkwasị onwe ya n'elu ya. Ọ na-ahụ na 400 ya: 1 broker ga-enye ya ohere ịmepụta ogwe 100,000 na ntinye akaụntụ 300 ya, ya mere, ọ na-eji ohere ahụ eme ihe, na-ejikwa obere akaụntụ ya na-anwụ ngwa ngwa.
Gọọmenti na-ahụ maka ọchịchị na United States (site na ogwe aka nke CFTC) na-echekwa na onye ọrụ ahụ bụ onye nwere anyaukwu na-amaghị ihe, ya mere, na 2010, ọ mere iji chebe onye na-achụ ego site n'aka ya site n'inyere ndị America niile aka ime ihe nkwụsị nke 50: 1, usoro nke malitere na October 2010. N'atụ egwu, nke CFTC chọrọ iji belata ihe mmiri na 10: 1 iji "onye ịgba chaa chaa" pụta, mana n'ikpeazụ, kpebiri na 50: 1 dị "ezi uche" na ihe kwekọrọ na ụbụrụ Japan banyere oge. Tupu 2010, ọ na-abụ na ndị na-ere ego na United States nwere ike inye 100: 1 ma ọ bụ 200: 1. Ọ bụghịkwa ọzọ. Ugbu a, United States na-egbochi ntinye aka na 50: 1 na Japan machibido leverage na 25: 1, mgbe ọtụtụ mba ndị ọzọ nwere elu leverage.
N'ozuzu, echere m na igbochi nhọrọ nke ndị ahịa nke US bụ azụmahịa dị njọ ma ghara ịsọ asọ na ndị ọzọ nke ụwa. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa ahịa na United States n'oge gara aga na-emegharị akụkọ ha n'èzí iji nwee ọṅụ n'emeghị ọtụtụ ihe mgbochi. Ndị Brits ma ọ bụ ndị Aussies ma ọ bụ Switzerland agaghị adị ngwa iji gbaa onwe ha ụkwụ, mgbe site n'ỊBỤGHỊ na-eso US, ha nwere ike ịme ọtụtụ nde mmadụ na ego ọzọ. Ntuchi a na ntinye ego nke United States bụ naanị otu n'ime ọtụtụ njedebe (dịka, iwu ndị na-abụghị ndị agha), nke na - emeghị ihe ọ bụla iji nyere ndị ahịa aka ma mee ka ndị ọzọ ghara ịmalite imekwu ihe na United States. Ọ bụ onye ezi omume, na ndị ọrụ gọọmentị na United States na-eche na 50: 1 leverage bụ "ezigbo" n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị elu ozu ahia.
The n'ezie eziokwu nke okwu ahụ bụ na elu brokerage leverage na nke ya onwe adịghị ize ndụ. N'ihi na Forex leverage adịghị agbanwe uru nke ọtụtụ, na i nwere a oke ahia dị iche iche ọtụtụ nha, ọ bụchaghị ihe ize ndụ ka ndị ọzọ leverage, dị ka ọ ga-abụ na futures, ebe ị na-apụghị ịgbanwe ọtụtụ size. Higher leverage dị nnọọ nweta ikike ahia ibu nza (ma ọ bụ karịa ọtụtụ) na obere ego. Ọ bụrụ na ị nwere nanị $ 500, ka ihe atụ, i nwere ike na-emeghe a Micro akaụntụ na 400: 1 leverage, nke mere na ị pụrụ ịchịkwa ruo 20 Micro nza na naanị $ 2.5 oke maka onye ọ bụla. Ma ọ bụ, ị pụrụ ịchịkwa 1 Micro ọtụtụ na dị nnọọ a $ 2.5 oke. Na n'etiti gị kacha nta na kacha eji leverage na ọtụtụ sizing bụ ọtụtụ dị ukwuu nke mgbanwe.
M na-ekweta na-enwe ihe pụrụ leverage pụrụ ịdị ize ndụ n'ihi na anyaukwu na-azụ ahịa, ma ọ bụla anyaukwu ozu ahia kwesịrị inwe a ohere kpọgidere ya na wepu ya si n'ọma ahịa. Ọ bụrụ na a anyaukwu ozu ahia nwere $ 1000 ya 400: 1 Micro akaụntụ, na ọ chọrọ iji karịa omume leverage maka ya ahia, ọ nwere ike imeghe 3 ọkọlọtọ nza na ya akaụntụ (na a na-eji oke nke $ 750), na ịgba chaa chaa ụzọ ya a ngwa ngwa ọnwụ. A nnọọ obere 30 pip aga megide ọkwá ya ga-eri ya $ 900 (10 X $ 10 kwa pip X 3 nza), na na na ọ ga-akpaghị aka na-enweta a oke oku nke ga liquidate ya 3 ọkọlọtọ nza n'ihi na ọ dịghịzi ama achọrọ oke ịchịkwa ha.
N'ihi ya, ọ bụ uru na-ewere ihe na mgbe ugboro ugboro ịdọ aka ná ntị: AKWA leverage pụrụ iduga ọkpụrụkpụ weere nakwa dị ka ọkpụrụkpụ uru. Ee, karịsịa maka ndị ogbi, anyaukwu na-azụ ahịa na-eji ukwuu nke leverage dị ka ha.
Erekwa na Naa Per Trade leverage ezie edebe The Right Iji Higher leverage
M kwere na mgbanwe leverage na mgbanwe ọtụtụ sizing edunye site Forex nwere ike ikwe ka ọtụtụ ahịa a anya nchebe trading arena karịa ma ebuka ma ọ bụ futures. A futures ozu ahia ga-eji leverage haziri maka maka nkwekọrịta kpọmkwem, nke nwere ike ịbụ ezi elu ma dị ize ndụ. A Forex ahia, na iche, nwere ike n'enweghị ahia nza na leverage hà ya na akaụntụ size. Ka ihe atụ, a mma amalite ahia size maka oghere n'ihi $ 1000 ga-eleghị anya a Micro-nzà, nke a ga-ike iji efu leverage. Ọ ga-ahụ na-adịghị enwe nchegbu banyere a 100 pip akpali decimating ya ajụjụ; kama, 100 pips megide ya ga na-eri ya $ 10 (ma ọ bụ 1% nke ya na akaụntụ), o nwere ike ọ nọkwasi si a nọmba nke adịkwa trades.
Nke a ozu ahia mgbe ahụ nwere ike itinye 200 nwere ike: 1 leverage maka ntinye, ohere ma ọ bụ mberede. Ka anyị gafere onye ọ bụla. Site na nhazi di iche iche, achoro m na enwere ike inwe ndi ahia na-eme ihe di iche iche n'uwa di iche iche. Ikekwe ị mepụtara ma ọ bụ chọta isii EA dị iche iche nwere nnukwu ọganihu na nlele na nlele ọzọ, na ịchọrọ inwe ikikere ịzụ EA isii niile, jiri 2% nke oke aka maka onye ọbụla. Site na ohere, ekwuru m na enwere ike inwe oge n'ahịa mgbe ịchọtara ohere magburu onwe ya na ịchọrọ iji ya dị elu ma ọ bụ karịa ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-eche na nsogbu ahụ dị gị mma, ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-eji mee ihe. I nwere ike ime ihe siri ike ma sie ike.
Mgbe ahụ e nwere ndị ikpe nke isi ike. Ị tara ahụhụ a nnukwu usoro nke adịkwa trades, na akaụntụ gị dị na ala $ 500 si ya mbụ $ 1000 (50% ọnwụ), nakwa mgbe ahụ ka ị nwere ike ka na-anọgide na-eji 0.01 ọtụtụ nha iji nweta gị nke onu, ma gị leverage ka toro na obere, n'ihi na 0.01 ọtụtụ size irè akara $ 1000 mgbe gị ugbu a nwere naanị $ 500 (na ị na-ugbu a na-eji a leverage nke 2: 1 iche na akaụntụ gị size). N'eziokwu, n'ihi nke 200: 1 leverage nwere, akaụntụ gị nwere ike ada n'okpuru $ 100 (90% nke gị mbụ), na i nwere ike ka na-eji 0.01 ọtụtụ size na-agbalị ka i si onu. The ukwuu leverage ike na-otú ikwe gị aka ịnọgide na gị mbụ ọtụtụ sizing dị ka akaụntụ gị tụlee. Tụlee na ebuka, ebe ọ bụla pasent ojuju na akaụntụ gị ga-amanye unu ahia 100 ngọngọ mbak nke nta na nta ngwaahịa ụkpụrụ, nke ga-eme ka o siere ha ike na ogologo ịrị ụzọ gị nke gị Olee ala.
Na njedebe, gị brokerage leverage na-ekpebi gị kacha nwere leverage, na ọ bụ gị mma mmasị ahia nta ogo ya, na-edebe ihe ndị ọzọ maka ejije nke diversification, ohere na ihe isi ike.
Oke, Ji oke Na Free oke
Ná mmalite nke isiokwu m kọwara otú onye ahịa nwere akaụntụ 1000 (mbụ nkwụnye ego) ji zụta 1 obere nza nke EUR / USD, nke nwere uru ọrụ nke $ 10,000. Were ya na onye ahịa ahụ nwere ikikere nke 100: 1 maka akaụntụ ahụ, mgbe ahụ iji zụọ obere nza nke 1, ọ ga-ewe $ 100 site na akaụntụ ya wee gbazite $ 9,900 site n'aka onye na-ere ahia. Ego ọ na-ewe na akaụntụ ya ($ 100) bụ oke or eji oke, Nke a na-eji ịnọgide na-enwe na-emeghe ahia ọnọdụ. E nwere ugbu a $ 900 na ya na akaụntụ na-adịghị na-ahịa. The ike na-eme ka ọzọ ahia kpebisiri ike site free oke nke bụ hara nhatanha site na nke ugbu a eji oke na-subtracted.
Oke ma ọ bụ na-eji oke
Ego ole na akaụntụ gị nke a na-eji ugbu a na-emeghe ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere 100: 1 brokerage, na ị mepee 1 obere nza, mgbe ahụ jiri akụkụ ejiji bụ $ 100. Lee okpokoro dị n'elu: Mbadamba Ntugharị / Mbadamba Nchịkwa Dị Mbadamba maka Iche Iche Iche. Karia, otu usoro bu:
Eji oke = (Market Quote maka ụzọ * Ọtụtụ) / leverage
(Ihe Nlereanya nke 200: 1 ore maka 1 mini ọtụtụ na 1.2700 EURUSD:
Iji mepee & ejigide gị ahia, ị ga-mkpa nwere dịkarịa ala $ 63.50 nke dị hara nhatanha na akaụntụ.
Iji mee ihe ma ọ bụ Free oke:
Ọ bụ ego ole na akaụntụ gị mwepu na oke (ma ọ bụ na-eji oke). Ọ bụrụ na ị nwere $ 1000 na akaụntụ gị na ị meghere 1 mini ọtụtụ na-achọ a oke nke $ 100, mgbe ahụ, gị free oke bụ $ 900.
Free oke = Equity - oke (ma ọ bụ Ji oke)
(Ihe atụ: $ 1000 - $ 100 = $ 900 free oke)
N'okpuru ebe a bụ MT4 nseta ihuenyo nke oke, Free oke na oke Ọkwa (Na-enweghị Ngwọta Window):
Anyị na-ama tụlere ihe oke na Free oke bụ. Na n'elu 400: 1 FXPro n'ihi $ 1399, anyị wepụtara a mini ọtụtụ na-eji $ 25 oke. Na doo $ 1371 free oke dị m ka m ọzọ trades. Ok, mgbe ahụ, ihe bụ oke larịị (ihe na 5504%)?
oke Ọkwa pasent:
Oke Ọkwa Pasent = (Equity / oke) X 100
Na nseta ihuenyo dị n'elu, nkwụnye ego m bụ $ 1397 nke 25 kewara site na 55, na-amụba site na 100, Enwere m 5504% pasent nke oke. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ na-eme ka ị hụ ngwa ngwa nke ala gị, karịsịa otú ị ga-esi ruo 100% ala ala, ọkwa dị elu nke na-abịakwute ọtụtụ brokers ga-eme ka a na-akpọ oku mmiri. Ka anyị kwatuo nseta ihuenyo dị n'elu:
Free oke: 1371.93
Oke larịị: 5504.38%
M na-eji $ 25 oke. N'ihi na a 100% oke Call Broker, m ga-enweta a oke oku liquidation mgbe hara nhatanha dara n'okpuru $ 25 (100% oke larịị).
Gịnị Bụ A oke Call?
Ma trading ebuka, futures ma ọ bụ Forex, niile na-azụ ahịa na-atụ egwu atụ ụjọ oke oku.
Kpọọ oku: ịdọ aka ná ntị site n'aka onye na-ere ahịa na akaụntụ gị agafewo akụkụ dị mkpa na%, yana na ezughị oke (ego na-ese n'elu - nnwụfụ na-ese n'elu + enweghị atụ) na akaụntụ ahụ iji kwado ndị ahịa Open gị ọzọ.
Si ore na-ekwu echiche, ọ bụ ụzọ ha nke na-echebe onwe ha site na adịkwa ego ha nyere gị site na oke na leverage. na Forex ọ bụghị a oku na-aga site na gị ore ịgbakwunye ihe ego, dị ka ọ bụ na ebuka na futures. Kama, ọ bụ na-emekarị akpaka full ma ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu liquidation gị ọnọdụ mgbe akaụntụ dara n'okpuru mmezi oke (isi obodo chọrọ na-emeghe a ọnọdụ, n'ihi na ihe atụ, $ 1000 maka a ọkọlọtọ ọtụtụ mgbe eji 100: 1). Lee table n'elu. The ukwuu leverage-eji na ọ na-ahia, na ihe ize ndụ ego i nwere na n'ihe ize ndụ, na ihe likelihood nke a oke oku.
Ị kwesịrị ịghọta n'ụzọ zuru ezu gị oke na-arụ ọrụ, na na na-agụ oke nkwekọrịta n'etiti gị na ore ahia. Ọ bụ mgbe a ezi echiche na-anya na gị Ji oke na Free oke iji hụ na ị na-adịghị eji ukwuu oke na na ị nwere ọtụtụ free oke ekpe.
Mgbe na ore ahia ekwu, sị: oke Call larịị = 100%.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọkwa dị elu bụ 100%, ị ga-enweta ọnụọgụ mkpuchi ọnụ (ma eleghị anya, ịdọ aka ná ntị ịmalite tupu oge) mgbe nha nha nhata gị na mpaghara gị, nke bụ, mgbe ọkwa gị dị na 100%. N'oge na-adịghị anya mgbe a ga-emechi ọnọdụ gị (na-abụkarị n'otu n'otu, na-amalite site na nke kachasị uru ruo mgbe a chọrọ ọkwa kachasị elu). Ọ bụ ezie na ọchịchọ 100% chọrọ na-eme ka ohere nke nsonaazụ ala dịkwuo nso, ọ na-echekwa ego karịa ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-efunahụ na-apụghị izere ezere site na igbochi gị ịnwụfu uwe elu gị. Ị nwere ma ọ dịkarịa ala, ego fọdụrụ na akaụntụ ahụ na njem ọjọọ ọjọọ.
Mgbe na ore ahia ekwu, sị: oke Call larịị = 50%.
Nke a na ore ahia na-na-na-emesapụ aka dị ka otú ọ ejiri gị n'ụzọ nke oke ókè. Ọ ga na-amalite liquidating akaụntụ gị mgbe gị hara nhatanha nhata ọkara gị eji oke, ya bụ, mgbe gị oke larịị na-aga ala na 50%.
Mgbe na ore ahia ekwu, sị: oke Call larịị 70%, kwụsị si 30%
Onye na-ere ahia a na-enyekwu aka ma na-enye gị ịdọ aka ná ntị ziri ezi. A na-ebido ịdọ aka ná ntị dị mkpirikpi mgbe ọkwa gị dị ala na 70%, na mmiri mmiri na-eme mgbe ọkwa gị dị ala gaa na 30%. Site n'itinye ọkwa ọkwa ala gị na ọkwa ndị a, enwere ike ịnwe mkpirikpi oku na-aga n'ihu (nke nwere ike ịba mma ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na usoro nchịkwa). Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ndị ọzọ nwere ike ịhapụ gị n'ụlọnga gị ma ọ bụrụ na ahịa ahụ na-aga n'ihu gị.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke a oke oku na a 100% oke Call Ọkwa Broker.
Jeff mepee akaụntụ micro na $ 1000 na 100: 1 leverage. Ọ na-enyocha EUR / USD ma kpebie ime mkpụmkpụ, na-abanye 4 mini nza na EUR / USD na ọnụahịa nke 1.3200. Dịka usoro dị n'elu [(Market Quote * Lots) / Leverage], Jeff ga-eji $ 520 (1.3200 * 40000) / 100). Tupu ịbanye, maapụ Jeff bụ $ 1000, ma mgbe ị banyere, ebe ọ na - akwụghị ụgwọ bụ $ 480 ($ 1000- $ 520) .Ọsọsọs na ndị ahịa Jeff na - aga megide ya: EUR / USD juputara 100 pips, 4 obere nha nhata $ 4, nkwụnye ego ya gbadara $ 400 (150X $ 4) iji ruo $ 600 (1000-400). Ugbu a Jeff na-ahụ na ya oke Ọkwa bụ 115% (Equity / Margin = $ 600 / $ 520), nke dị nso na ya 100% ọkwa oke. N'ebe a, mkpịsị ụkwụ ya agbanwewo uhie dị ka ịdọ aka ná ntị. Mgbe EURUSD jumps up 25 pips ọzọ, njirimara akaụntụ ya gbadara $ 100 (25X $ 4) iji ruo $ 500. Ugbu a, o rutela n'okpuru 100% ogo oke ala ma usoro ahụ na-emechi ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ dịkwuo nso .Ọ bụrụ na ihe dị nso na 100%, ọtụtụ ihe nwere ike ịme, dabere na iwu njedebe nke onye na-agba ahia. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta ọnọdụ mmiri na 100%. dabere na usoro iwu nke onye na-ere ahia, ọnọdụ ya nwere ike ịbụ kpamkpam ma ọ bụ ka ọ bụrụ na ọ bụ nke ọma. Ebe ọ bụ na Jeff nwere usoro 100% nke ọnụ ọgụgụ ikpo oku na onye na-ere ya na-elezi anya ya, onye na-ere ya na-amalite ọnọdụ akpaaka (nke kachasị buru ibu) ruo mgbe akaụntụ ya na-agafe n'elu elekere nyocha nke 100%. Na mbụ, o nwere ike ịhụ na otu n'ime ọnọdụ ya anọ kwụsịrị na loss 125 pips, belata ihe ọ chọrọ ka ọ gaa na $ 390 (maka $ 500,), nke na-ebute ọkwa ya n'ogo na 128%.
Ma ọ bụrụ na ahịa ahụ dara site na 25 pips ọzọ, ọ ga-ahụ na akaụntụ 75 (25x $ 3) ga-agbada na $ 375, nke ọzọ na-eme ka ọ dị n'okpuru 100% max ọkwa, ọ ga-ejedebe nke abụọ ọnọdụ na ọnwụ 150 pips. Nke a ga - eme ka ala ala ya dị elu ruo $ 260, ya na $ 375 nke nha nhata, a ga - ebigharị ya na 144%. Ikekwe mgbe ahụ, ebe ọ hụrụ na 60% nke mbụ ya, Jeff ga-akpọ ya na-akwụsị ma mechie ọnọdụ abụọ ikpeazụ -150 pips na-efu nke ọ bụla, n'ihi nnukwu ego efu nke $ 625.
Ogbenye Jeff, o ji ihe dị ukwuu leverage na nwetara onwe ya ná nsogbu. N'eziokwu, Jeff kwesịrị e erekwa na naanị 2: 1 leverage, nke gaara 2 Micro nza maka ya $ 1000 akaụntụ (2 Micro nza = $ 2000). Mgbe ahụ a 150 oghom aga megide ya gaara eri ya naanị $ 30 (150X $ 0.20), a na ọnwụ nke naanị 3% nke ya na akaụntụ. Jeff ga-ahụ na-enwe ike na-alụ ọgụ ụbọchị ọzọ.
Olee otú Iji Zere oke Oku & Kwụsị outs?
Jiri smart leverage. Gbalịa ka ahia karịa 2: 1 leverage mgbe ọ bụla otu oge.
Akọ capitalization. Jide n'aka na i nwere ego zuru ezu na-emeghe ma na-enwe trades.
Belata gị ize ndụ. Gbalịa ka ị ghara n'ihe ize ndụ karịa 3% nke akaụntụ gị ọ bụla onye ọ bụla n'ime ahia.
Ebe akwụsị iji chebe gị hara nhatanha si ịrịba losses.
N'ikpeazụ, a na-enwe ike ịhapụ njedebe oke n'akụkụ site na iji dị ala karịa ihe ngosi dịnụ iji mee ka azụmahịa gị na nyochaa nkwụnye akaụntụ na oge niile. A na-atụ aro mgbe ụfọdụ na mmadụ kwesịrị iji nkwụsị iwu na ọnọdụ ọ bụla iji dochie ihe ize ndụ, ma ndị a nwere ike inyere gị aka, mana ịchekwa ihe dị ala na-akwụ ụgwọ na akaụntụ gị bụ usoro nchịkwa kacha mma. Ị nwere ike ịgụkwu ihe na nke a na ego Management ngalaba.
Olee otú iji zere oke Oku & Kwụsị outs
Leverage Ọtụtụ na oke
Oke Call Broker
Oke Ji oke na Free oke
Erekwa na Naa Per Trade leverage mgbe edebe Right Higher leverage
Gịnị bụ a oke oku
Gịnị bụ leverage
Gịnị ga-abụ ndị nwere ize ndụ ma na-enweta Ụgwọ Ọrụ nke ị na-ahọrọ a ore àjà a elu leverage karịa ọzọ